Musharrax Cali Xaaji Warsame: “Waa in musharraxiinta iyo bulshadu door ku yeeshaan guddiga xallinta khilaafaadka ama …” (dhegayso) – Radio Daljir
Diseenbar 7, 2018 4:42 g 0
Musharrax Cali Xaaji Warsame oo u tartamaya xilka Madaxweyne ee Puntland ayaa waraysi uu siiyey Radio Daljir kaga hadlay guddiga xalinta khilaafaadka ee dhowaan uu soo magacaabay Madaxweyne Gaas.
Isagoo ku sugan magaalada Badhan ayuu Musharax Cali Xaaji Warsame Radio Daljir u sheegay in gudigaasi qaarkood yihiin shaqaale Dawladeed oo aan kalsooni lagu qabi karin wuxuuna dhaleeceeyey Madaxweynaha Puntland ee iminka wakhtigiisu dhamaadka yahaya oo uu sheegay inuu talada dalka keligii maroorsanayo.
“Guddigaasi waa guddi aasaas u ah doorashada Puntland waana guddi ku soo baxa heshiis la rabo madaxda dalka iyo bulshada sida musharaxiinta in ay door ku yeeshaan sida muuqata Madaxweynuhu waxa uu kari waayey bal cid kale iska daaye inuu Madaxweyne Kuxigeenka la tashado, arrintaasi waa guuldarro siyaasadeed”, ayuu yiri Cali Xaaji.
Cali Xaaji Warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in loo baahan yahay “in heshiis laga gaaro khilaafka jira ama garsoorku xal kama danbays ah ka gaaro. Mowqifkaygu waxa weeye in loo baahan yahay in arintaas laga heshiiyo oo dhulka la dhigo guddi lagu kalsoonyahayna soo baxo. Waxaan aaminsanahay waxgaradka iyo isimadu in ay door ku yeeshaan ama Garsoorku go’aan ka gaadhaan”, ayuu hadalkiisa raaciyey.
Musharax Cali Xaaji Warsame ayaa Madaxweyne Gaas ku eedeeyey inuu soo xulay guddi aan lagu kalsoonaan karin sharcigana uu baalmaray markii uu magacaabayey guddiga xalinta khilaafaadka ee Puntland.
Cali Xaaji waxa uu u warramay Khadar Cawl, Daljir Buuhoodle. Hoos kaga bogo.